Choputa Santa Claus Village na Rovaniemi, Finland | Akụkọ Njem
Obodo Santa Claus
Susana Garcia | | Finlandia, General
Santa Claus Village bụ ogige ntụrụndụ mara mma emi odude ke ikpehe Lapland ke Finland. Ọ dị nso na Rovaniemi ma bụrụ otu n'ime ebe ndị njem kachasị na mba ahụ, ọkachasị n'oge oge ekeresimesi. Ugbua na Nọvemba anyi gbara gburugburu ihe eji agba ekeresimesi ma enwere otutu ndi mmadu obi uto na oge a na ihe obula kwesiri ime ya dika ndi Santa Claus.
Ka anyị hụ ihe a ga-eme nke a peculiar obodo dị na Lapland, ebe Arctic Circle bidoro. Ọ bụ akụkụ a na-ahụ anya nke doro anya maka ụmụ ntakịrị, mana ọ nwekwara ike ịbụ nnukwu njem maka ndị okenye. Chọpụta akụkụ ndị na-echere gị na Santa Claus Village.
1 Otu esi aga Santa Claus Village
2 Gafe Arctic Circle
3 Selọ Roosevelt
4 Santalọ Santa Claus
5 Santa Claus Post Office
6 Snowman ụwa
7 Zụ ụgbọ ịnyịnya
Otu esi aga Santa Claus Village
Este ebe a na-eche echiche dị nso na Rovaniemi, dị kilomita asatọ, na kilomita abụọ site na ọdụ ụgbọ elu obodo ahụ, na-eme ka ọ dị mfe ịnweta. Ọbụghị naanị na anyị nwere ike ị nweta ọdụ ụgbọ elu a, mana ndị mmadụ na-akwụsịkarị na Helsinki-Vantaa. Agbanyeghị na oge dị ala enweghi ọtụtụ ụgbọ elu, n'oge ekeresimesi a na-abawanye okpukpu atọ, yabụ ọ ga-adị mfe ịchọta otu. Enwekwara ogige a site na bọs gaa obodo Rovaniemi, nke ị nwere ike isi na bọs ma ọ bụ ụgbọ oloko gaa obodo ndị ọzọ dị na Finland.
Gafe Arctic Circle
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị mmadụ mere njem rue oge a mgbe akabeghị ụlọ villa a. N'oge a enwere akara nke na-egosi akara ebe a na-adịghị ahụ anya nke anyị na-abanye na Arctic Circle. Ndị mmadụ na-esekarị foto gafere ebe a, ebe ọ bụ ihe atụ. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ otu n'ime ihe ole na ole anyị nwere ike ime na Santa Claus Village, mana ọ bụrụlarị kpochapụwo ma na-eme ka anyị nwee mmetụta na ebe pụrụ iche.
Ọtụtụ mmadụ na-eche ihe ụlọ Roosevelt na-eme ebe a. Eziokwu bụ na e wuru ụlọ a ngwa ngwa na 1950 ka m kelee nwanyị mbụ, Oriakụ Roosevelt n'oge ahụ, onye bịara ịhụ ka ọrụ a ga-esi wughachi ebe a nke Agha Worldwa nke Abụọ tara ahụhụ. Lọ a dị mita ole na ole site na nke ugbu a ma oge na-aga, ọ ghọrọ ebe ndị njem nleta. E wuru ụlọ dị ugbu a kpọmkwem n'akụkụ Arctic Circle iji mee ka ọ bụrụkwuo njem nleta na mmasị. N'ime ya ị nwere ike ịzụta ihe ncheta ma see foto.
Santalọ Santa Claus
Ọ bụrụ na e nwere ebe dị ezigbo mkpa na nke a thematic ohere bụ n'ezie ụlọ Santa Claus. Ọ bụ ụlọ mara mma n’èzí ma dịkwa n’ime. Nke a bụ ebe anyị nwere ike ịchọta Santa Claus, onye anyị ga-ekwurịta okwu ma were foto na ọbụlagodi vidiyo. Dika o nweghi ike ibu ozo, anyi na achota ulo ahia ebe ị nwere ike izuta ihe ncheta di nma iji cheta oge a di nma.
Ke Santa Claus Village anyị ga-ahụ Santa Claus Post Office, nke ụlọ ọrụ Finnish Post Office na-achịkwa. Dị ka anyị maara nke ọma, ụzọ ịkpọtụrụ Santa Claus iji mee arịrịọ bụ site na akwụkwọ ozi, yabụ na ụlọ ọrụ a nwere ọtụtụ ọrụ n'oge ekeresimesi. N’ọfịs ahụ enwere oche oche ka anyị nwee ike idere onwe anyị akwụkwọ ozi wee zigara Santa Claus. Tụkwasị na nke a, anyị ga-enwe ike ịhụ leta ụfọdụ ndị ọbịa hapụrụ ma ha na-agwa anyị ole akwụkwọ ozi Santa Claus natara ruo taa.
N'ime obodo a anyị nwekwara ike ịnụ ụtọ nnukwu ụlọ ọrụ ndị a. Ọ bụ ihe gbasara a ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, yana ụlọ nkwari akụ ice. Nke a bụ otu n'ime ahụmịhe ndị ahụ anyị na-ekwesịghị ịhapụ, ebe ọ bụ na foto na ncheta ga-atọ anyị ụtọ. Iri efere salmọn dị ọkụ, ihe na-ahụkarị ihe, bụ otu n'ime nnukwu kpakpando na ụlọ oriri na ọ iceụ ice a. Ha nwekwara oghere ice na-atọ ụtọ maka ụfọdụ egwuregwu. Ọ bụrụ na anyị nwekwara ike ịnọ na nkwari akụ ice, ahụmịhe ahụ ga-ezu oke.
Zụ ụgbọ ịnyịnya
Dị ka ebe ọ bụla anyị hụrụ snow, na Santa Claus Village anyị nwere ezinụlọ anyị ihe niile na-atọ ụtọ. Otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu bụ ịnya ịnyịnya na sleds dị jụụ. Azụ ndị a na-ebukarị nkịta dị ka huskies na bụ nnukwu ntụrụndụ maka ndị ọbịa. Anyị nwekwara ike ịhụ ụfọdụ nne mgbaka. Typesdị ahụmịhe ndị a na-eme ka obodo a bụrụ ebe dị mma nke dabara adaba maka ezinụlọ dum. Ọbịbịa ụmụntakịrị agaghị echefu echefu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Obodo Santa Claus
London na ụmụaka